बिहीबार राति वीणा उल्का वर्षा हुने, नेपाली आकाशमा रमाइलो दृश्य देखिने
वैशाख ९ गते राति ११ः०० बजेदेखि वैशाख १० गते बिहान सूर्योदयसम्मको समय यो वर्षा उच्च देखिने
काठमाडौँ । मौसमले साथ दिएमा यही वैशाख ९ गते राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देखिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ ।
वैशाख ३ गतेदेखि सक्रिय रहेको वीणा उल्का वर्षा (लाइरिड मिटियोर सावर) यही वैशाख १७ गतेसम्म सक्रिय रहने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । वैशाख ९ गते राति ११ः०० बजेदेखि वैशाख १० गते बिहान सूर्योदयसम्मको समय यो वर्षा उच्च देखिने उहाँले सुनाउनुभयो ।
अत्यधिक सक्रियताका समयमा प्रतिघन्टा १५–२० वटा उल्का खसेको देख्न सकिने सोसाइटीले जनाएको छ । ‘थ्याचर’ नामक पुच्छ्रे«ताराले छाडेका धुलाका कण पृथ्वीको वायुमण्डलमा घर्षण भई जलेर नष्ट हुँदा यो उल्का वर्षा देखिने गर्दछ । ‘थ्याचर’ पुच्छ«्रेताराले सूर्यको एक परिक्रमा गर्न ४१५ वर्ष लगाउँछ ।
पुच्छ«्रेतारा वा धुमकेतुले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो कक्षमा धुलाका कण छाड्ने गर्छन् । जुन लाखौँ किलोमिटरसम्म फैलन सक्छ । यसरी फैलिएका धुलाका कणले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ ।
परिक्रमा गर्ने क्रममा जब यी धुलाका कण पृथ्वीको वायुमण्डलमा ठोकिन्छन् तब उल्का देखिन्छ । यदि यस्तो दृश्यमा १० वा सोभन्दा बढी उल्का देखिएमा त्यस्तो घटनालाई उल्का वर्षा भन्ने गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, बैशाख ८, २०७८, ०९:३५:०६
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गोदावरी सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन, हेरौ तस्बिरमा तीन हजार जना अट्ने सम्मेलन भवन
भक्तपुरका अस्पतालमा अक्सिजन सकियो, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी
काठमाडौं महानगरका ३२ ओडामा ४२ हजार संक्रमित , कुन वडामा कति? यस्तो छ बिबरण
काठमाडौंका ५८ वटा अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित, कुन अस्पतालमा कति संक्रमित? यस्तो छ बिबरण
खोप खरिद प्रकरण: हुकम डिस्ट्रिब्यू्सन एण्ड लजिष्टिक प्रालिले ठाडै कमिशन माग्यो - मन्त्री त्रिपाठी ‘कमिशनरुपी भूतप्रेतले विगारे’ - मन्त्री त्रिपाठी,
शुक्रवार, बैशाख २४, २०७८ जनता नेपाल
कोभिडको महामारीमा शुरु हुनासाथ गत वर्षपनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेशनलसँग बदनियतपूर्ण सम्झौता गरेर सरकार आलोचित भएको थियो । यो बर्ष कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आमजनता आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार यस पटक पनि खोप खरिद प्रकरणमा मुछिएको छ । सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री र एजेण्ट बीच कशिमनको कारण भारतबाट खोप ल्याउने प्रकृया अवरुद्ध भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कमिशन एजेण्ट र बिचौलियाहरुले कमिशन मागेको कारण भारतबाट खोप ल्याउन नसकेको बताएपछि खोप प्रकरणको बिषय बाहिरिएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
खोप खरिद प्रकरण: कमिशनको चक्करमा लागेको छैन - सुरज बैद्य
खोपको कमिशन प्रकरणमा मुछिएका उद्यमी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैधले आफू र आफनो परिवार खोप खरिद कमिशनमा सम्लग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले बिचौलियाले ३२ करोड कमिशन मागेको कारण भारतबाट खोप ल्याउन नसकेको अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरे पछि खोप खरिदको बिषय जनस्तरमा पनि चासोको बिषय बनेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका विश्वासपात्र भनेर चिनिएका सुरज वैद्यले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसंग पनि आफूले खोप ल्याउने बिषयमा पहल गरेको थिए । पुरा पढ्नुहोस्